XAJMIGA IYO CAARADA BARAFKA LOOGU TALAGALAY BISADAHA: XEERARKA ISTICMAALKA DHIBCAHA, SHAAMBADA IYO FOOMAMKA KALE - GURI, GURI
Celandine ama cawska cawska, sida ay dadku ugu yeeraan, waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Daawooyin badan ayaa loo diyaariyaa iyada oo saldhig u ah, oo ay ku jiraan diyaarinta antiparasitic ee xayawaanka.
Lacagta "Celandine" waayo boodada iyo shilinta bisadaha waa daawooyinka xoolaha.
"Chistotel" - khadadka qalabka
Diyaargarasyo ​​ku saabsan alkolada alkol celandin waa daroogo xoog leh oo loo isticmaali karo taxadar iyo raacitaanka tilmaamaha.
Waxay waxtar leeyihiin la dagaallanka maaha oo keliya ectoparasites - boodada, Bastoolad iyo cayayaanka kale ee dhiigga nuugayalaakiin sidoo kale waxay bogsiin kartaa saameynta ay qaniinyada ay ku leeyihiin qaabka gardarrada helminthic.
Miisaaniyada waxay diyaarisay diyaarsanaanta dhakhtarka xoolaha ee boodada iyo shilinta:
daroogada antihelminthic ee bisadaha dadka waaweyn;
Dhammaan macnaheedu waa la isticmaali karaa loogu talagalay xayawaanka qaangaarka ah iyo kuwa uurka leh ee ka wayn 8 usbuuc. Dhammaan diyaargarasyadu waxay muujinayaan da'da xayawaanka ay isticmaalaan.
Dhalada iyo dhibcaha shimbiraha
Waxay ka kooban yihiin alkolada celandine fipronilkicin kara boodada, iyo permethrinoo iyaga dila.
Waxaa caan ku ah waxtarnimada dhibcaha ee bisadaha "Celandine." Tilmaamaha loo isticmaalo:
Dhibcaha waxaa lagu dabaqayaa xannibaadda ama inta u dhexeysa garbaha xayawaanka, taas oo ah, meelahaas bikradaha aan lick aan lick.
Suufka iyo xoqidda daroogada maqaarka.
Waxay gashaa maqaarka maqaarka, wuxuu galaa jirka wuxuuna ku fidaa dhammaan maqaarka.
Sababta oo ah sunta, sunta waxaa la sii daayaa dibedda waxaana inta badan dhererkoodu uu dhintaa ka hor inta uusan qaniinin bisad..
Laguma talin in lagu maydho xayawaanka 2-3 maalmood ka dib markaad dalbato dhibcaha, si ay u bilaabaan inay u dhaqmaan..
Ficilkeedu wuxuu ku salaysan yahay kaliya in la nuugo maqaarka iyo dhiigga xayawaanka diyaargarowga lagu daboolay qoryaha.
Saameynta ugu weyni waa cabsida cayayaanka.Suunka ayaa la marsiiyey wax ka kooban walax leh muuqaal adag oo xoog leh. Daboolka ayaa lagula talinayaa inuu isticmaalo dhibcaha.
Xaqdarnimada laga bilaabo 2 ilaa 4 bilood. Wixii kiss ah waxaa jira qoorta "Chistotel Junior"lagu qooyay saliidaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo warshadaha dhirta.
Waxaa ku jira si aad ah hoos ugu dhejinta alkaloids ka badan dhibcood. Isaga halkii loo isticmaali lahaa sidii prophylactic ah. Codso iyo haddii ay dhacdo dhaawacyo culus oo xayawaan ah.
Isticmaalayaasha waxay daryeesheen bisadaha dheer-dheer. Wixii iyaga, waxay abuurtay shaambo leh saameyn daryeel, fududeynta combiga. Waxaa jira shaambo gaar ah oo loogu talagalay caruurta.
Shampoo waxaa lagu daboolayaa dhuun qoyan leh dhaqdhaqaaqa duugista, waxoogaa ku garaaca xumbada.
Waxaa la maydhaa 4-5 daqiiqo biyo badan.
Shampoo antiparasitic ma laha tallaabo dheerad ah, waxay dili kartaa iyo boodada boodada iyo shilinta, laakiin ma difaaco mustaqbalka. Ilaalinta dheeraadka ah ee ka hortagga cayayaanka, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo dhibcaha "Celandine"..
Daadi loogu talagalay dhogorta macmacaanka, iyo sidoo kale deegaankiisa, gogosha iyo qalabka jilicsan.
Intaadan codsan si fiican u rux dhalada.
Isku buufin dhamaan jirka bisada laga bilaabo fogaan ah 15-20 cm
Hawlgalay dhabarka, caloosha, cagaha.
Kafaarad lagu ruxay faleebo ayaa loo isticmaalaa in lagu daboolo madaxa iyo dhegaha. Tani waxaa la sameeyaa si loo hubiyo in daroogadu aysan ku iman indhaha iyo xuubka xuubka. Ka dib markaad sameysid, si taxadar leh u shanlaa baalasha, kana saar haraadiga diyaargarowga adoo suufka ku jira. Dhaq gacmaha iyo gacmaha si fiican ugu dhaq saabuun ka dib.
Maalmaha soo socda La xariirida bisaduhu waa inay xaddidan tahay. Duufaantu waxay ka hortageysaa xayawaanka jiran iyo kuwa daciifka ah, bisadaha uurka leh iyo kuwa nuujinaya, iyo sidoo kale kittens illaa 2 bilood..
Qaar ka mid ah alkaloids oo ku jira celindine waxay leeyihiin saameyn curyaanka ah ee dirxiga, iyada oo aan waxyeello u keenin bisad. Waxaa laga heli karaa laba nooc - kiniin ah xayawaanka dadka waaweyn iyo ganaaxa Glistogon.
"Celandine" ma dili karo dulin, laakiin waxay curyaantaa, ka dibna waxa laga saaraa jidhka saxarada. Ciqaabtu waxay dhaqaajisaa dhowr saacadood ka dib. Inta lagu jiro maalinta, daroogada ayaa gebi ahaanba ka baxda kaadida. Haddii aad si adag u ilaaliso qiyaasta, "Glistogon" waa gabi ahaanba mid badbaado u ah xoolaha.
Ka-joojinta waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo kittens laga bilaabo da'da 3 toddobaad. Waxaa la siiyaa xayawaanka inta lagu guda jiro subaxdii cunno ama foomka saafiga ah adoo isticmaalaya kala-saaraha.
Tirada kiniinnada qof weyn oo loo qoondeeyey waxaa lagu xisaabiyaa miisaankiisa. Waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo raaco tilmaamaha si aan xayawaanka loo sumoobin. Haddii ay jiraan wax caddayn ah sumowga, la xiriir dhakhtarkaaga si dhakhso ah.
Marka laga soo tago daawooyinka tayo sare leh "Chistotel" fadlan qiimo jaban. Qiimaha qiimaha lacagaha la wareejiyay - laga bilaabo 50 ilaa 80 rubi.
Daryeelidda caafimaadka xayawaanka waa in ay macquul tahay. Ha isticmaalin daroogada haddii aadan ogeyn sida ay u saameyn doonto daroogada. U hubso in aad isku duwo isticmaalka daweynta sunta leh ee dhakhtarka xoolaha haddii kalluunkaagu uu jiran yahay, uur leeyahay, ama uu quudinayo ilmo.